‘कारखाना’ निर्देशकलाई ६ प्रश्न, क्रेडिट कसले लिने ? « Ramailo छ
‘कारखाना’ निर्देशकलाई ६ प्रश्न, क्रेडिट कसले लिने ?
प्रकाशित मिति : Jun 25, 2017
फिल्म ‘कारखाना’ यही असार १६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्म प्रचारको लागि यतिबेला सबै टिम लागि परेको छ । तर फिल्म निर्माण टिमबिच खटपट पर्दा निर्देशक सापकोटा सम्पादन नसक्दै बाहिरिएका थिए । टिममा कसरी आयो असमझदारी ? निर्देशक बिनाको फिल्म कस्तो बनेको होला ? यही सेरोफेरोमा रहेर निर्देशक सापकोटासँग कुराकानी गरेका छौं :
१.कारखाना कस्तो प्रकारको फिल्म हो ?
‘कारखाना’ पूर्ण रुपमा नारी प्रधान फिल्म हो । यो फिल्मले महिलाहरुको विभिन्न स्वरुपको पोको नै बोकेको छ । फिल्ममा हामीले सामाजको नौलो कथा लिएका छौं ।
२.नौलो कथा भन्नाले कस्तो कथा लिनु भएको छ ?
यो चाहिं भाडामा बच्चा दिने आमाको कथा हो । जसमा मौसमी मल्ल, सुशिल श्रेष्ठ, बर्षा सिवाकोटी, नविन लम्साल र जेविका कार्कीको मुख्य भूमिका रहेको छ । लामो समयपछि मौसमी दिदी (मौसमी मल्ल) पर्दामा ब्याक हुनु भएको छ । फिल्म पनि राम्रो बनेको छ ।
३.फिल्म राम्रो बनेको भन्नुभयो, तर तपाईं नै फिल्मबाट आउट हुनभएछ ?
हो, निर्माताहरुसँग केही कुराहरुमा असमझदारीमा भएको हो । तरपनि अहिले हामी सबै कुरा बिर्सिएर हामी अहिले चाहिं फिल्मको प्रचार प्रसारमा लागि रहेकाछौं ।
४.खास तपाईं र निर्माताहरुबिच असमझदारी चाहिं के मा थियो ?
छायाँकनदेखि पनि समस्या आयो । हामी बिच भएको असमझदारीलाई अरु कसैले फाइदा उठायो । पहिलो ड्राफ्ट काटेपछि मेरो ड्राफ्ट अनुसार उहाँहरु (निर्माताहरु) सहमती हुनु भएन । कलाकारको सहयोगमा चाहि उहाँहरुले फिल्म काट्न थाल्नु भयो । यो कुरामा पनि मैंले अपत्ती जनाइन् । यस कुराबाटै हाम्रो मनमुटाव सुरु भएको थियो ।
५.भनेपछि फिल्म कस्तो बनेको होला त ?
चाहेजति कुरा दिन नसक्दा अलिक दुःख त लागेको छ । तरपनि राम्रो बनेको छ । कथा तथा पटकथा, छायाँकन राम्रो छ । कारखाना मेरो पहिलो सन्तान हो त्यसकारण माया लाग्छ । सन्तान जस्तो भएपनि मैंले पालनपोसन गरेको छु । बाबा र भाईले फिल्म हेरेर बधाई दिनुभयो । यसमा म खुसी छु ।
६.अब कारखाना सफलता र असफलताको क्रेडिट चाहिं कसले लिने त ?
म एक्लैले केही पनि क्रेडिट लिन मिल्दैन । सफलता र असफलताको क्रेडिट सबैले बाँड्नुपर्छ ।